Jarmalku wuxuu meel marinayaa sharci cusub oo qaxootiga fursado badan siinaya - iftineducation.com
aadan21 / May 27, 2016
iftineducation.com – “Waxaan qabaa inay tahay guul taariikhi ah in Dowlada isbaahaysiga ahi ku soo heshiiso sharciga isdhexgalka” Merkel sidaa waxay ka tiri shir jaraa’id oo ay si wada jir ah u qabteen iyada iyo ku xigeenkeedu.
Raysal Wasaare ku xigeenka Sigmar Gabriel ahna madaxa Xisbiga SPD ayaa balan qaaday in Jarmalku noqon doono dal fursad fiican siiya soo galootiga, “Waxaan filayaa inay dadku qabsan doonaan fursadaas si is dhexgalku u shaqeeyo” Ayuu yiri.
Muxuu dhigayaa sharciga cusubi?
Soo galootiga waxaa loo ogolaan doonaa inay dhigtaan koorsooyinka loo yaqaano isdhexgalka (integration courses) ee lagu barto luuqada, Laakiin hadii aad Iskuulka tegi weydo waxaa lagaa jarayaa cayrta.
Dowladu waxay abuuri doontaa 100,000 oo shaqo taas oo saacadii lagu bixin doono inta u dhaxaysa 1 ilaa 2.5 Euro.
Soo galootiga cusub ee dalka soo gala waxaa hoos loo dhigayaa lacagaha la siiyo waana ku waajib inay ka shaqeeyaan shaqada 1ka Euro loo yaqaan, Laakiin hadii ay diidaan shaqadaas waxaa laga jarayaa lacagta cadaanka ah ee la siiyo waxayna qaadan doonaan waraaqo ay ku soo adeegtaan.
Sharciga hada oo dhigaya in aan qaxootigu shaqayn karin ilaa shaqadaas loo waayo qof Jarmal ah ama dhalashada Yurub haysta waa la joojinayaa mudo sadex sano ah, Qaxootigana waxaa loo ogolaanayaa inay ka codsadaan shaqo meelaha shaqo la’aantu ka hoosayso celceliska guud ee dalka.
Waxbarashada iyo tababarada (Ausbildung).
Sharciga cusubi wuxuu u oglaan doonaa magangelyo doonka inay dalbadaan koorsooyinka tababarada marka ay dalka joogaan mudo gaaraysa 3 bilood.
Hadii aad joogtay dalka mudo ka badan 15 bilood waxaa laguu ogol yahay inaad dalbato lacagaha lagu bixiyo mashaariicda tababarada, Kumase jiraan soo galootiga ka yimi wadamada loo aqoonsan yahay inay nabadi ka jirto sida Kosovo, Albaaniya, Seerbiya, Aljeeriya, Tuunuusiya iyo Marooko.
Qofkii soo hela tababar shaqo (Ausbildung) si toos ah ayaa loo siinayaa degenaansho sharci ah mudada uu tababarku socdo, Hadii uu helo shaqo marka uu tababarka dhamaysto waxaa degenaanshaha loogu kordhinayaa 2 sano oo kale, Laakiin hadii uu shaqo waayo keliya waxaa la siinayaa fursad degeneensho oo lix bilood ah si uu mudadaas shaqo u raadsado.
Sharciga degenaanshaha joogtada ah.
Sharciga degenaanshaha joogtada ah ee Soomaalidu u taqaano (10-ka sano ama Abadiya) waa la bedelay qaabkii lagu heli jiray, Tusaale ahaan awal waxaa lagaa rabay inaad dalka joogtay sadex sano hada mudadaas waxaa laga dhigay shan sano.
Si aad u dalbato sharcigaas waa inaad si fiican u taqaanid luuqada, Sidoo kale waa inaad tahay qof shaqo haysta oo ku filan noloshiisa (Dowlada aan cayr ka qaadan ama kiro guri laga bixin).
Degenaansho Khasab ah.
Laga bilaabo hada ilaa sadexda sano ee soo socoda, Dowlad Goboleedyada ayaa go’aaminaya meeshii aad degenaan lahayd umana yeelan doonto xoriyad inaad Gobolkii aad doontid u guurto, Laakiin hadii aad shaqo soo hesho ama koorsooyin tababar waa laguu ogolyahay inaad degto meeshii aad ka soo heshay, Qodobkana kuma qaban doono.
Sharcigan waxaa canbaareeyey kooxaha u dooda xuquuqda qaxootiga iyo hay’adaha samafalka iyagoo warqad ay kaga cabanayaan u qoray Wasiirka Arrimaha Gudaha Thomas de Maiziere.
Pro Asyl, oo ah koox u dooda qaxootiga ayaa dhaleeceeyey afar qodob oo sharciga cusub ka mid ah, Iyagoo leh waxay meel ka dhac ku yihiin xuquuqihii dastuuriga ahaa ee ay xaq u lahaayeen dadka magangelyo raadiska ahi.
Hadii aad tahay qof dadaalaya oo ay ka go’antahay inuu dhex galo dhaqanka iyo dhaqaalaha dalka Jarmalka gaar ahaan jecel inuu luuqada barto, Shaqo tago ama fursado tababar helo, Sharcigani waa mid ku anfacaya.
Laakiin hadii aad tahay qof jecel inuu cayrta qaato oo aan hamigiisu gaarsiisnayn inuu dhex galo bulshada wadanka, Maaha sharcigu mid kuu danaynaya , Sida uu fahansan yahay Warsidaha Faaqidaad.
Sidoo kale magangelyo doonka isi soo dhiibay ee hada soo gelaya (cusub) sharcigani uma roonaan doono.
HOOS KA DAAWO WARBIXIN AANU KA DIYAARINAY SHARCIGA CUSUB.
Donald Trump oo helay codad ku filan